I-PLOS ne-TCC Africa Basebenzisana Ukusekela Abaphenyi Base-Afrika - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda on I-19th Meyi 2021 I-19th Meyi 2021
Kwa-AfricArXiv, sizoqhubeka nokusungula ukuhamba komsebenzi okuvulekile kuzo zonke izifunda zomhlaba kanye nabashicileli ezifinyelelekayo, ezingabizi futhi ezizuzise umphakathi wonke wezazi wase-Afrika. Sijoyina i-TCC Africa kanye ne-PLOS emizamweni yabo yokuqhakambisa nokwandisa ukutholakala kokufinyelela okuvulekile kanye nokuvula isayensi kabanzi ngokubanzi.
Lesi yisimemezelo esenziwe yi-TCC Africa mayelana nokusebenzisana.
The Vula i-PLOS yomshicileli Wokufinyelela, Kanye Isikhungo Sokuqeqesha Ezokuxhumana, ezinze eNyuvesi yaseNairobi, eKenya, (eyaziwa njenge-TCC Africa) imemezele ubudlelwano bokuqinisekisa ukuthi izintshisekelo namagugu emiphakathi yocwaningo yase-Afrika amelwe ezincwadini, izinqubomgomo, kanye nezinsizakalo ze-PLOS. Lezi zinhlangano zombili zizosebenzisana ukutadisha nokwakha izindlela zokuvula Ucwaningo ezisebenzela abacwaningi base-Afrika kanye nababambiqhaza ngaphakathi kohlelo lomphakathi wezifundiswa ngenkathi kugcinwa imigomo eyinhloko yocwaningo oluvulekile.
"Lokhu kungukuqala kobambiswano oluyisimangaliso oluzosiza ababambiqhaza bezemfundo ephakeme ekwamukeleni isayensi evulekile, ezosiza ukukhulisa ukubonakala kocwaningo lwabo," kusho uJoy Owango, uMqondisi Omkhulu we-TCC Africa. "I-PLOS ne-TCC Africa banezinhloso ezifanayo ekusekeleni ucwaningo kanye nomphakathi wezifundo ngokwenzela intando yeningi ucwaningo ngokwamukela ngempumelelo isayensi evulekile."
“Sijabule ngendlela emangalisayo ngokusebenzisana neJoy neTCC Africa. I-TCC Africa ibambisene ngokwemvelo ne-PLOS, njengoba izinhlangano zethu zinezinhloso ezifanayo, ”kusho uRoheena Anand, isihloko, i-PLOS. "Sizibophezele ekuqhubekiseni inqubo evulekile yesayensi nokwandisa ukumelwa kanye nokufakwa kocwaningo lwase-Afrika ezingeni lomhlaba jikelele, kodwa ngezindlela ezithuthukiswa nemiphakathi yasendaweni, futhi ngenxa yalokho ziyayisebenzela."
Mayelana ne-TCC Africa
Isikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana (i-TCC Africa), yisikhungo sokuqala sokuqeqesha esizinze e-Afrika ukufundisa amakhono okuxhumana asebenzayo kososayensi. I-TCC Africa iyiTrust ewina imiklomelo, esungulwe njengenhlangano engenzi nzuzo ngonyaka we-2006 futhi yabhaliswa eKenya. I-TCC Africa inikeza ukwesekwa kwamandla ekwenzeni ngcono okukhishwa ngabacwaningi nokubonakala kwabo ngokuqeqeshwa kwezokuxhumana kwezazi nezesayensi.
I-PLOS ayinzi nzuzo, umshicileli we-Open Access onika amandla abacwaningi ukusheshisa inqubekela phambili kwezesayensi nakwezokwelapha ngokuhola uguquko kwezokuxhumana kocwaningo. Besilokhu siphula imingcele selokhu kwasungulwa ngo-2001. Amaphephabhuku e-PLOS aqhubezela ukunyakaza kwezinye izindlela ze-OA kumajenali okubhaliselwa. Sasungula ukushicilelwa kokuqala kwezigwegwe eziningi okubandakanya lonke ucwaningo oluhle kakhulu kungakhathalekile ukuthi iyini into entsha noma umthelela futhi sakhombisa ukubaluleka kokutholakala kwemininingwane evulekile. Njengoba i-Open Science iqhubekela phambili, siyaqhubeka nokuzama ukuhlinzeka ngamathuba amaningi, ukukhetha, nokuqukethwe kwabafundi nabaphenyi.
Lesi simemezelo sashicilelwa ekuqaleni e tcc-africa.org/plos-and-tcc-africa-partnering-to-support-african-researchers/
Izindaba ezifakiwe nge-PLOS ne-TCC Africa
Njengomnikelo ku Isonto Lokubuyekeza Kontanga 2020, I-TCC Africa futhi I-AfricArXiv bahlele i-webinar ukuze ingene shi ekuthuthukisweni kobuchwepheshe obusha obheke eRepid and Open Peer Review. Ngaphezu kokushicilelwa okungama-300 (iziqalo kanye nezindatshana zephephabhuku) kuyatholakala ku-inthanethi kuchazwa Ucwaningo lwe-COVID-19 e-Afrika kanye nase-Afrika
Ukubukeza Kontanga Ngokushesha Nokuvulekile
Thina, iqembu labashicileli kanye nezinhlangano zokuxhumana zezazi, sizibophezele ekusebenzisaneni ekubuyekezweni okusheshayo nokubuyekezwa kwabashicileli ukuze sithuthukise ukusebenza kahle nokushesha kwenqubo yokuhlola nokubuyekezwa kontanga yocwaningo lwe-COVID-19.
Tags: ukufinyelela okuvulekilevula isayensiI-PLOSukushicilelaI-TCC Africa
Uma ungumcwaningi, mhlawumbe ujwayelene nomjikelezo wempilo yocwaningo nazo zonke izinselelo namathuba ahambisana nakho. Kuyizindaba ezinhle uma ungumcwaningi ovela eSub-Saharan Africa Funda kabanzi…